Aung Lay, Author at MDY News - Page2of 268
August 6, 2020 Aung Lay 0
မင်္ဂ လာနှစ် ပတ်လည်နေ့လေး မှာ ချစ်ဇနီးလေး ကို တန်ဖိုးကြီး နားကပ်တ စ်စုံ လက်ဆောင်ပေး ခဲ့ တဲ့ ရွှေထူး ရွှေ ထူး နဲ့ ရွှေမှုံရတီက နေနဲ့လ၊ ရွှေနဲ့မြလို လိုက်ဖက်ညီလွန်းတဲ့ စုံတွဲလေးတစ်တွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီက သရုပ်ဆောင်နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်သလို [Read More]
ဘိုကေလေးညှပ်ကာ အိုက်တင်မျိုးစုံပေးနေတဲ့ ဂျူနီယာမြင့်မြတ်လေး
မြင့်မြတ်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားခဲ့သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်ကတော့ သဘာဝကျတဲ့ ဇာတ်ရုပ်တွေ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံတွေကြောင့် အကယ်ဒမီဆုတွေကို ဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအားကျချစ်ခင်နေရပြီး အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ သားလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ မြင့်မြတ်ရဲ့သားလေးမြတ်သူကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ [Read More]
အပြင်စားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ချပြလိုက်တဲ့ ဖွေးစိန်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေးကတော့ ပီပြင်ပြောင်မြောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုတွေကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက ပိုပြီး အားပေး နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မာနမရှိဘဲ ဖြူစင်တဲ့ [Read More]
လူသိနည်းသော နမိတ်များ ဒါမျိုးတွေမလုပ်မိအောင်ရှောင်ပါ
လူသိနည်းသောနမိတ်များဒါမျိုးတွေမ လုပ် မိအောင်ရှောင်ပါ အိမ်ရှေ့တရော်ထုပ်မချိတ်ပါနှင့်အိမ်ရှိလူများကျမ်းမာရေးညံ့တတ်၏စားပွဲပေါ်ဖိနပ်မတင်ပါနှင့်ဖိနပ်ပိုင်ရှင်ထိုအိမ်မှထွက်ခွာသွားရတတ်၏ဓားကတ်ကြေးလက်ဆောင်မပေးပါနှင့်ကိုယ့်လာပေးလျှင်လည်းငွေအနည်းငယ်စတိပြန်ပေးပါ ။ ထိုသူနှင့်ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးလမ်းခွဲရတတ်၏ကတ်ကြေးမကစားပါနှင့်ကံဆိုးခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်တတ်၏အဝါရောင်ပန်းလက်ဆောင်မပေးပါနှင့်လက်ခံသူကံဆိုးတတ်၏ ။ ၆ညအခါလမ်းနောက်ပြန်မလျှောက်မိပါ‌စေနှင့်နာနာဘာဝတို့ကိုယ့်နောက်လိုက်လာတတ်၏ထာင်ထားသည့်လှေကားအောက်ဖြတ်မလျှောက်ပါနှင့်ကံဆိုးတတ်၏စကားပြိုင်တူပြောမိလျှင်ဂေါ်မစွံဖြစ်တတ်ပါသည် ။ ပြောမိရင်ကိုယ့်နှာခေါင်းပြန်ကိုင်လိုက်ပါကြည့်မှန်ကွဲမသုံးပါနှင့်ကံညံ့တတ်၏ဖုန်းမှန်ကွဲမျက်မှန်ကွဲလည်းထို့အတူမှတ်ယူပါညစားစားရင်းသီချင်းမဆိုပါနှင့်မကောင်းဆိုးဝါးဝင်စားတတ်၏ ။ နှစ်ယောက်ထိုင်ခုံတစ်ယောက်တည်းထိုင်ရင်ထောင့်ကပ်မထိုင်ပါနှင့်ဌက်ပျောတုံးဖက်ရတတ်၏လေမိုးကျချိန်အဝတ်အစားအနီရောင်ဝတ်ပြီးအပြင်မထွက်ပါနှင့်မိုးကြိုးပစ်ခံရတတ်၏ကလေးငယ်များအပေါ်ခုန်ကျော်မကစားပါနှင့်ထိုကလေးသက်ဆိုးမရှည်ဖြစ်တတ်၏ ။ ခရက်ဒစ် Zawgyi လူသိနည္းေသာနမိတ္မ်ားဒါမ်ိဳးေတြမ လုပ္ မိေအာင္ေရွာင္ပါ အိမ္ေရွ႕တေရာ္ထုပ္မခ်ိတ္ပါႏွင့္အိမ္ရွိလူမ်ားက်မ္းမာေရးညံ့တတ္၏စားပြဲေပၚဖိနပ္မတင္ပါႏွင့္ဖိနပ္ပိုင္ရွင္ထိုအိမ္မွထြက္ခြာသြားရတတ္၏ဓားကတ္ေၾကးလက္ေဆာင္မေပးပါႏွင့္ကိုယ့္လာေပးလွ်င္လည္းေငြအနည္းငယ္စတိျပန္ေပးပါ ။ ထိုသူႏွင့္ဆက္ဆံေရးအဆင္မေျပျဖစ္ၿပီးလမ္းခြဲရတတ္၏ကတ္ေၾကးမကစားပါႏွင့္ကံဆိုးျခင္းကိုဖိတ္ေခၚတတ္၏အဝါေရာင္ပန္းလက္ေဆာင္မေပးပါႏွင့္လက္ခံသူကံဆိုးတတ္၏ ။ ၆ညအခါလမ္းေနာက္ျပန္မေလွ်ာက္မိပါ‌ေစႏွင့္နာနာဘာဝတို႔ကိုယ့္ေနာက္လိုက္လာတတ္၏ထာင္ထားသည့္ေလွကားေအာက္ျဖတ္မေလွ်ာက္ပါႏွင့္ကံဆိုးတတ္၏စကားၿပိဳင္တူေျပာမိလွ်င္ေဂၚမစြံျဖစ္တတ္ပါသည္ ။ ေျပာမိရင္ကိုယ့္ႏွာေခါင္းျပန္ကိုင္လိုက္ပါၾကည့္မွန္ကြဲမသုံးပါႏွင့္ကံညံ့တတ္၏ဖုန္းမွန္ကြဲမ်က္မွန္ကြဲလည္းထို႔အတူမွတ္ယူပါညစားစားရင္းသီခ်င္းမဆိုပါႏွင့္မေကာင္းဆိုးဝါးဝင္စားတတ္၏ [Read More]
ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ဘုရားပုံတော်တွေ၊ဘုရားစာအုပ်တွေကို စွန့်ပစ်ဖို့စိတ်ထဲ မရှင်းမလင်း ဖြစ်နေသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာ ထားပြီးပူဇော်ခဲ့တဲ့ ဘုရားပုံတော်တွေ ဘုရားစာအုပ်တွေ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြဲသွားလို့ စွန့်ပစ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာစွန့်ပစ်ရင်သင့်တော်မလဲဆိုတာကို စိတ်ထဲ ဇဝေဇဝါနဲ့ ဆုံးဖြတ်မရ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. မစွန့်ပစ်ရက်လို့ စုထားပြန်ရင် လည်း တဖြည်းဖြည်း များလာပြီး ထားစရာနေရာက အခက်အခဲရှိလာပြန်တယ်ဒီတော့ မဖြစ်မနေစွန့်ပစ်ရတော့မယ်ဆိုပြန်ရင်လည်း မသင့်တော်တဲ့နေရာမှာ စွန့်ပစ်မိမှာ စိုးကြပြန်ပါတယ်..ဒါနဲ့တစ်နေ့က ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးထားတာကို မနောပဒါယီ [Read More]
အမေစုကို ချစ်တဲ့သူတွေ Like & Follow သွားလုပ်လို့ ရပီနော် နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် အသုံးပြုမည့် ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာသစ် စတင်ထွက်ပေါ် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသုံးပြုမည့် လူမှုကွန်ယက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာသည် သြဂုတ်လ ၅ ရက်တွင် [Read More]
စုလှိုင်ဝင်းကေ တာ့ ကြော်ငြာ နဲ့ Photo Shooting လေးတွေ ရိုက်ကူးပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို လုပ်ကိုင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အကဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ လူသိများအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ စုလှိုင်ဝင်းက ပုရိသတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေသူလေးတစ်ယောက်ပါ။ စုလှိုင်ဝင်းကတော့ ပညာရေးတစ်ဖက်နဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ကိုင် နေသူလေး [Read More]
လိပ်သိုမြို့တွင် ကိုဗစ်ထောက်ပံ့ငွေ အပြည့်မပေးသည့် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ် ချုပ်ရေးမှူး တိုင်ကြားခံရ
လိပ် သိုမြို့တွင် ကို ဗစ်ေ ထာက်ပံ့ငွေ အပြည့်မပေး သည့် ကျေးရွာ အုပ်စုအုပ် ချုပ်ရေး မှူး တိုင်ကြားခံရ က ရင်ပြည်န ယ်၊ လိပ်သိုမြို့၊ ရှမ်းလယ်ပြင်ကျေးရွာအုပ်စုမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့ အ‌ခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် နိုင်ငံတော်ကပေးအပ်တဲ့ ကိုဗစ်ထောက်ပံ့ငွေတွေကို ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြည့်ပြည့်ဝဝပြန်လည် မပေးအပ်တဲ့အတွက် မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ [Read More]
နောက်ထပ်ချစ်ရမယ့်သူလေးရှိနေပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ G Fatt
လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်G Fattကိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ G Fatt ဟာတေးစီးရီးအယ်ဘမ်ပေါင်းများစွာကိုထွက်ရှိအောင်မြင်ထားပြီး ထွက်သမျှသီချင်းတိုင်းကလည်းပရိသတ်တွေအကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့မကြာသေးခင်ကမှချစ်သူဖြစ်သူနန်းစုရတီစိုးနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေကိုပြောပြထားခြင်းမရရှိသေးပါဘူး။ G Fatt ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်တစားနဲ့ရှိနေကြပြီး ဒီနေ့မှာတော့သူ့မှာနောက်ထပ်ချစ်သူရနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှကနေယခုလိုပဲဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။”ကျွန်တော်ကသီချင်းတွေကိုချစ်တယ်။ အားနေတဲ့အချိန်ကိုယ်ဝါသနာပါတာလေးတွေလုပ်ရတာလည်းပျော်တယ်။ အခုတော့ကိုယ်ချစ်တဲ့သီချင်းတွေလိုပဲ နောက်ထပ်ချစ်ရမယ့်သူလေးရှိလာပါပြီ။အထင်မကြီးကြပါနဲ့ဦး။ Samsung Galaxy Note20 ကိုပြောတာပါဗျာ”ဆိုပြီး စနောက်ကာရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Source:G [Read More]
လိုင်းပေါ်မှာတစ်ချို့သောအနုပညာရှင်တွေဖုန်တွေထကြတာမြင်ရတွေ့ရတော့ကိုယ်တွေအားပေးနေတဲ့idolတွေကို….ပိုပြီးလေးစားလာရတယ်….. Facebookလဲမသုံးinterviewတိုင်းလဲမဖြေ….ဘယ်အစီစဉ်မှာမှမတွေ့ရဖင်ထယားဖို့မပြောနဲ့သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဘယ်မှလဲတောင်ဘားမှမသိရ ကိုယ်တွေမှာ သီချင်းခွေထွက်မှသြော်ထွက်ပါပြီလားလို့တယူရတဲ့ဘဝဒီဘီးကျဲကြီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုဆယ်စုနှစ် ၃စုနီးပါးလွမ်းမိုးထားတဲ့အနုပညာရှင်တွေချီးပေါက်ရင်တောင်နားထောင်လို့ကောင်းမဲ့အသံပါရမီရှင်တွေအော်’ဒီဘီးကြဲတွေသာfacebookသုံးကြည့်ပါလား ဘယ်လောက်တောင် followerတွေ ရမလဲ ဘယ်လောက် အခွင့်အလမ်းတွေရှိမလဲ? ဘယ်လောက်notiတွေယူလို့ကောင်းမလဲ?၅နှစ်သားခလေးတွေတောင်ဖုန်းနိုပ်တက်တဲ့အချိန်မှာဦးညီထွဋ်ကြီးကပြောတယ်အန်းဒိတ် ကျတယ်ပဲပြောပြော ကျွန်တော်facebookမသုံးတက်ဘူးတဲ့ဝါသနာလဲမပါဘူးတဲ့ကြည့်စမ်းနေတာထိုင်တာဘယ်လောက်ရိုးစင်းသလဲ? ဦးအငဲကိုinterviewသမားကသွားမေးတယ်မေးစရာရှိမြန်မြန်မေးပါဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကမဖြေတက်လို့ပါတဲ့အံမယ်သီချင်းထဲမှာလူတစ်ယောက်နှုံးခွေသွားအောင်စာသားတွေထဲ့တက်တဲ့တေးရေးတေးဆိုကိုကြီးငဲကinterviewမဖြေတက်ဘူးဆိုတော့မေးတဲ့ကောင်မလေးမှာလဲ ခပ်နင်နင်ပေါ့ ဦးလေးဖြူဆိုမဖြစ်မနေicရဲ့ရှေ့ထွက်မို့အင်တာဗျူးခံရတယ်Interviewတော်တော်များများမှာမတွေ့ရတာကိုမေးတော့ကျွန်တော်စကားတွေအများရီး မပြောရဲဘူးမပြောတက်ဘူးတဲ့ တစ်ချို့စကားတွေက ကိုယ့်ခေါင်ကိုယ် ပြန်ထုသလိုဖစ်တက်လို့တဲ့…. အမလေး ဗျာ ခုဖုန်ထနေတဲ့ကောင်တစ်ချို့တွေနဲ့ကွာပါဗျာနေပုံထိုင်ပုံလဲရိုးစင်းတယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ် လဲနိမ့်ချတက်တယ်အနုပညာဝမ်းစာလဲပြည့်တယ်ဒီပြည့်တဲ့ အိုးတွေကဘောင်ဘင်မခတ်ကဘူး…. [Read More]